Nampitroatra ny Indoneziana sy nampihenjana ny fifandraisana ara-diplomatika ny fanamelohana ho faty ilay mpiasa mpila ravinahitra tany Arabia Saodita vao haingana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2018 12:20 GMT
Mpikatroka milanja sora-baventy, misy ny sarin'i Tuty Tursilawati ny iray tamin'izany, ilay novonoina tany Arabia Saodita tamin'ny 29 Oktobra 2018. Sary natolotry ny Migrant Care, nahazoana alàlana.
Tamin'ny 29 Oktobra 2018, notontosain'i Arabia Saodita ny fanamelohana ho faty an'i Tuty Tursilawati, mpiasa mpitady ravinahitra indoneziana, kanefa tsy nisy fampandrenesana avy amin'ny masoivoho izay nampilaza ny manampahefana Indoneziana momba ny fikasan'izy ireo.
Araka ny sendikan'ny mpiasa mpitady ravinahItra Indoneziana, izay nanadihady ny raharaha nanomboka tamin'ny taona 2010, dia nogadraina i Tursilawati taorian'ny namonoany ny rain'ny mpampiasa azy, izay nanararaotra azy tamin'ny herisetra ara-nofo araka ny filazany. Tamin'izany fotoana izany, niasa nandritra ny valo volana tao amin'ity fianakaviana ity izy, saingy ny roa volana voalohany niasany ihany no nandraisany karama .
Taorian'ny nanatontosany ilay famonoana, nandositra tany Lameka niaraka tamin'ny vola kelikely sy ny firavaka halatra vitsivitsy i Tursilawati. Teny an-dalana, araka ny fitantarany tamin'ny ONG izay nanampy azy, dia nanolana azy ary nandroba azy ny lehilahy miisa sivy.
Nanambara ny vaovao tao amin'ny media sosialy ny Fikambanana Migrant Care:
Vaovao mampalahelo indray avy any Arabia Saodita. Novonoina noho ny fanamelohana ho faty tamin'ny 29 Oktobra 2018 i Tuty Tursilawati, mpiasa mpifindra monina Indoneziana avy ao Majalengka. Natao tsy nisy fampahafantarana mialoha teo anatrehan'ny governemanta Indoneziana ny famonoana. #SeingEnPaixTuty #stophukumanmati [atsaharo ny fanamelohana ho faty]
Nanao sakana teo amin'ny masoivohon'i Arabia Saodita tao Jakarta, renivohitr'i Indonezia, ho fanoherana ny famonoana an'i Tuty ireo mpanao hetsi-panoherana Indoneziana. Naneho fahatezerana tao amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny mpisera indoneziana.
Manameloka ny famonoana an'i Tuty Tarsilawati aho. Tsy hoe tsy nisahirana fotsiny tamin'ny fampilazana ny [masoivoho] ny governemanta Saodiana fa satria mampisalasala ihany koa hoe hanakana ny heloka bevava ny fanamelohana ho faty . Ny fanontaniako iray hafa dia ny hoe: nahazo fitsarana ara-drariny ve izy?
Tao amin'ny Facebook, nanoratra i Musliha Rofik hoe:
Tsy manana eritreritra ny hanao ratsy ny mpampiasa azy mihitsy ireo rehetra izay maniry ny hiasa any ivelany. [Tsy misy olona maniry] ny hanao herisetra, afa-tsy noho ny fiarovan-tena, mba hiarovany ny voninahiny, ny ainy. Ho ahy, maherifo niady ho an'ny anjarany sy ny an'ny fianakaviany i Tuty. Tahaka an'i tompokovavy Siti Zaenab [mpiasa mpifindra monina indoneziana iray hafa novonoina noho ny fanamelohana ho faty tamin'ny taona 2015] izay nikasa ny hanatanteraka ny nofinofiny ho an'ny zanany sy ny fianakaviany. Rahoviana vao hahafantatra ny fanajana ny maha-olona i Arabia Saodita… ny mamono dia manitsakitsaka ny zon'ny olona iray hiaina. Malahelo sy tezitra [aho], satria mbola ampiharina eto amin'ny fireneko ny fanamelohana ho faty. # atsaharo ny fanamelohana ho faty
Ary nanoratra i Lexy Rambadeta :
Veloma mandrakizay, Tuti. Inona no fomba mahomby indrindra hisorohana izany tsy hitranga indray? Ary moa ve ny governemanta Indoneziana na ny olon-kafa afaka hanao zavatra matotra [fitakiana mafy], mba tsy ho matimaty foana izy?
Fifandraisana ara-diplomatika mangozohozo
Taona vitsy lasa izay, nanatontosa ny fanamelohana ho faty ny mpiasa mpila ravinahitra Indoneziana matetika i Arabia Saodita. Araka ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny any Indonezia, farafahakeliny Indonezianina miisa 103 no voaheloka ho faty tao Arabia Saodita teo anelanelan'ny taona 2011 sy 2018.
Tsy i Tuty no voalohany tamin'ireo Indoneziana mpiasa mpila ravinahitra novonoin'ny manampahefana Saodiana taona 2018. Tamin'ny volana Martsa, nomelohin'ny Fanjakana ho faty ihany koa i Muhammad Zaini Masrin , Indoneziana iray izay nilaza fa nanao sonia noho ny fanerena fiaiken-keloka ho namono ny mpampiasa azy. Raha voampanga tamin'ny taona 2004 izy dia nigadra nandritra ny 14 taona vao novonoina . Taorian'ny fanambaràna ny didim-pitsarana an'i Masrin vao nahare momba izany ny masoivoho tany Indonezia ao Jeddah .
Nilaza ny Filoha Indoneziana Joko Widodo fa nalahelo ny fahafatesan'i Tuty Tursilawati izy. Naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny fiantsoana ny ambasadaoro Saodiana, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, Retno Marsudi.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nanolotra ny fanazavàny manokana i Al Shuaibi, ary nilaza fa natao mba hanadiovana azy tamin'ny fahotana vitany ny fanamelohana an'i Tuty ho faty. Nanda ihany koa ilay ambasadaoro tamin'ny filazana fa niaro tena i Tuty, ary nilaza izy fa novonoiny ny lahy antitra. Nanamafy ihany koa izy fa “had ghilah”, izany hoe efa nomanina, ny heloka bevava nataon'i Tuty ka tsy afaka natao ny fanafahana azy madiodio na dia efa nanaiky ny hamela azy aza ny fianakavian'ilay lehilahy novonoina.
Tamin'ny taona 2015, nitsahatra ny fandefasan’ i Indonezia mpiasa mpila ravinahitra tany Arabia Saodita noho ny tatitra momba ny fanararaotana atao amin'ireo mpiasa an-trano, saingy tsy nanakana ny tambajotran'ny mpanondrana olona an-tsokosoko tamin'ny fandefasana mpiasa tsy misy taratasy na miaraka amin'ny taratasy sandoka ity fampitsaharana ofisialy ity. Nilaza ny Minisitry ny Asa Indoneziana Hanif Dhakiri vao haingana fa mbola manankery hatrany ny fampitsaharana ary tsy mieritreritra ny hanala ilay fandraràna i Jakarta.
Nandeha tany Jakarta mba hihaona amin'ny Minisitra Retno Marsudi, herinandro talohan'ny famonoana i Adel al-Jubeir, Minisitry ny Raharaham-bahiny Saodiana. Tsy fantatra mazava anefa raha noresahana nandritra ny fihaonana ny famonoana an'i Tuty sy ireo tranga hafa momba ny mpiasa Indoneziana mpila ravinahitra hafa .
Taorian'ny tsy fanekena tamin'ny fanantaterahana ny famonoana an'i Tuty, dia notadiavin'i Indonezia ny hanasoniavan'i Arabia Saodita fifanaraham-pilazana tsy maintsy atao amin'ny kaonsilà. Izany dia natao mba ahafahan'i Indonezia mamantatra ny momba ny olom-pireneny mila fanampiana ara-pitsarana any Arabia Saodita. Ankehitriny, firenena telo ihany no nanao sonia ny fifanarahana tahaka izany tamin'i Indonezia: Aostralia, Filipina ary Brunei.
Ny rafitra Kafala
Manameloka ny rafitra Kafala (“fanohanana”) ho “fanandevozana tsy milaza ny anarany” ny mpiaro ny zon'olombelona iraisam-pirenena . Mazàna any amin'ny firenen'ny Helodrano toa an'i Libanona sy any Jordania no ampiharina ny Kafala .
Araka ny voalazan'ilay mpanao gazety Mona Eltawahy dia rafitra iray izay mamandrika ireo mpiasa mpila ravinahitra ny Kafala :
Matetika aho no miresaka momba ny famoretan'ny Saodiana ny zon'ny vehivavy izay antsoiko hoe karazana fanavakavaham-bolokoditra, izay ampiharina amin'ny rafitra mpanara-maso. Vao mainka miharatsy kokoa izany ho an'ny mpiasa an-trano izay voahilikilika avo roa heny, satria vehivavy sady mpifindra monina izay voafandrika tanteraka ao anatin'ny rafitra momba ny asa amin'ny kafala/fanohanana.
Eo ambanin'ny rafitra Kafala, afaka mihazona ny pasipaoron'ireo mpiasa ireo mpampiasa sy ny sampan-draharaha manolotra asa ary mandray fanapahan-kevitra izay miantraika tanteraka amin'ny hoavy sy ny fiainam-pahasoavan'ny mpiasany.